Master planii Addis Ababaa wayyaanee fi Icciitii isa duuba jiru…. Of baraaruuf tokkummaan haa kaanu! | Oromia Shall be Free
Master planii Addis Ababaa wayyaanee fi Icciitii isa duuba jiru…. Of baraaruuf tokkummaan haa kaanu!
bilisummaa September 4, 2015	Comments Off on Master planii Addis Ababaa wayyaanee fi Icciitii isa duuba jiru…. Of baraaruuf tokkummaan haa kaanu!
Weerara Minilikiin dura abbaa biyyaa kan turan ilmaan oromiyaa naannoo finfinnee gosa Abbichuu, Eekkaa, Gullee fi Galaan kan jedhamuun beekamu ture. bulchitootiin naannoo kana kan turaanii fi kan minili galaafate keessaa yaadannoodhumaaf jecha kan akka (Tufaa Munaa, Duulaa, Jimaa Jaatanii, Guto Waasarbi, Jimaa Tiksee, Abeebee Tufaa, Waaree Sullee, Tufaa Araddoo, Mojoo Boxoroo fi kan biroo ni jiru).Silaa otoo dhugaan jiraatee maqaa angafoota kanaan daandii fi bakkootiin seena qabeessa Finfinnee mogga’uu qaba ture. Kun afeetu qubbattuu alaalaa dhufeen moggafame. adda durummaan Miniliki akka sabaattis ta’ee aadaan gosa kanaa naannoo finfinneetii akka maca’u taasise. Bakka waaqeffannaa Oromoo fi yaa’ii ummataa, hunda balleessuudhaan bakkota kanatti, aadaa fi safuu Oromoo wajjin kan hin deemne, moggaasa lafaa fi bakka taa’umsa bataskaana Abashaa taasisan.
Idda Mashashaan Dhufee ,
Madda: kitaaba Gammachuu malkaa
Maqaan garaa garummaa haa qabaatan malee, bitootiin Habashaa kaabaa dhufan Oromoo fi oromiyaa balleessuu irratti imaamata tokko qabu. Miniliki, H/Sillaasee, Dargii fi wayyaaneen dhimma Oromoo irratti garaa garummaa hin qaban. garaa garummaan isaanii mala ittiin saba kana balleessanii fi saaman duwwaa irratti garaa garummaa qabu. aangoon siyaasaa, dinagdee fi humni nagaa amma Oromoo harka hin jirretti garbummaa jala jiraachuun dirqama nutti ta’ee jira.
Haalli yeroo ammaa wayyaaneen itti jirtu, aftee Miniliki kan ta’e, raacitii Oromoo naannoo finfinnee balleessuuf kutattee kan kaatee dha. akkuma Miniliki moggaasa maqaa naannoo finfinnee maqaa alagaan moggaase wayyaanenis dursitee moggasa maqaa Oromoo balleessitee jirti. Maqaa daandii gurguddaa finfinnee keessa jiru, akkuma jirutti maqaa alagaan moggaafteee jirti. Kan Miniliki moggaasee ture akkuma jirutti haaromsitee jirti. Eega kana raawwatee booda akka sabaatti Gosa Oromoo naannoo finfinneetti hafe, guutummatti badduu baasuuf labsa itti baafatanii jiru. abbaa biyyaa kan ture gosti Oromoo Abbichuu, Galaan, Eekkaa fi Gullallee raacitiin isaa akka badu maqaa Mastar Plaanii Addis Ababaa jedhuun itti aguugdee duula jalqabdee jirti. Seenaa Oromoo keessatti Minilikitti aansee kan gosa Oromoo balleessuuf labsa bifa iccitaawaa ta’een itti labsee jiru Wayyaanee dha.
Maqaa Master Planii Addis Ababaa jedhuun maaliif wayyaaneen daldaaluu barbaadde?
Karoorri wayyaanee inni yeroo dheeraa ammoo Oromoo akka Oromootti tokkummaa isaa dhabamsiisuu dha. jecha gara biraatiin sirnootiin wayyaanee dura turan akkuma Oromoo humna dhoorkuuf qoqoodaa turan wayyaanenis bifa ammayya’een karoora Habashummaa isaanii itti fufsiisuu dha. inni duraa Oromoo keessaa finfinnee lafa keeyya kan jedhu balleessuu dha. akka amma karoorfametti dhalataan naannoo sanaa gara miliyoona 3tti shallagamu buqqisuudhaan maqaa misooma jedhuun dhalataa naannoo biraa oromiyaa keessa qubachiisuu dha. ummati finfinnee amma gara miliyoona 7 ta’u waggaa 20 booda dachaadhaan guddachuu akka qabu karoorfatanii jiru. karoora kana hojiirra oolchuuf maqaa master plan jedhuun Oromooo buqqisanii balleessuu dha. gosa Oromoo amma tokko akka raacititti hafee aadaa isaa beeku gosa Abbichuu, Gullallee, Galaanii fi Eekkaa guutummaatti mancaasuu dha. kanaaf seenaan gosa kanaa kanaan booda yoo waraqaa irratti jiraate malee qaaman hin jiraatu. Akka karoora wayyaaneetti.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoo karaa nagaa qabsoo sabaa gaggeessaa jiranis ta’ee karaa hidhannoon bilisummaa fi mirga saba keenyaaf falmaa jirru garaa garummaa xixiqqaan wal xaxaa deemuun keenya dhuma irratti akkuma argaa jirru diina fuunduratti nutuffachiisee jira. kana beeknee hariitiin mooraa qabsoo Oromoo humneessuu qabna. Yeroon amma keessa jirru yeroo dhimma garee, aangoo fi gosaa yaadan miti. Diina yoo ta’e akkuma argaa jirru , namoonni gosaan yaannus gosa balleessuuf jiru, namootin naannoon yaannus naannoon badaa jira, namoonni amantaan yaadus amantaan badaa jira. kanaaf yeroon ammaa yeroo oromummaan dhaabbatan malee yeroo gareen yaadan miti. Badiin oromiyaa fuula keenya dura dhaabbachuu qaba. tarii wal dhibdeen dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana dura ture murannoon falli akka itti argamu gochuu dha. dhaabni siyaasaa kanaaf of hin kennine mataa isaatiin oromiyaaf otoo hin taane, gargaaraa diinaa ti.
Previous Maaster Pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf dhaadatuu eegalan.
Next Waldaan Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association in Europe (OCAE)